Wasiirkii waa soo laabtay. Gabdhiina waa la eryey | allsanaag
Wasiirkii waa soo laabtay. Gabdhiina waa la eryey
Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Gaas, oo horay ugu kala hiiliyey Wasiir iyo Gabdh ku xigiinkiisa ahayd oo la qabyaaladeeyey . ayaa maantana gabdhii shaqada ka eryey , halka uu wasiirkii Majeerteen soo celiyey oo isla wasaaraddiisii u magcaabay. Wasiirka caafimaadka Puntland Cabdi naasir Cismaan Cuuke ayaa wasaaradiisii ku soo laabtay . Aamino Maxamed Cabdulaahi oo ka hor timid qabyaaladda wasiirka, oo markii hore wasaardda caafimaadka laga bedelay. Maantana Shaqadii waa laga eryey
Aamino Maxamed Cabdulaahi , oo ka soo jeeda beeshaWarsangeli oo ahayd wasiir ku xigeenkii ugu shaqada badnayd, oo intii aan wasaarada Caafimaadka laga bedelin oo UU sababteeda lahaa wasiirka wasaaraddasi markii uu madaxweynaha Puntland u sheegay inaanu arki karin Gabadhaas. Waa kuwan shaqadii ay qabatay
Sanadki 2014 kii
Dangroayo , Buurtinle, Boocame, Tukaraq, Xiingalool ,Wardheer, libaaxo,Uusguro,Baqbaq, Dhahar, Kaladhac,Baaragaha qol,, Ceelbuuh,yubbe ,Hadaaftimo, Badhan,Rad ,Mindigale xarumaha Boosaaso , Qaw, Ceelaayo , Carmo. Ely, Qandho, Geed Cilimi Mayla, Jariiban oo ay ka dhagax shift at xarun caafimaad idinkama lagu shaqeeyo Garacad. Iyo tuulooyin kale
Buhoodle, Xadhadhan,Kulmiye, Banyaal, Buraan oo ay ka soo dhistay golihii deegaanka iyada oo ay la sacadan wasirka arimaha gudaha Axmed karaash oo ay shaqadiisii la fududaysay gaysayna deegaankaa iyo wasiirkii hore we warfaafinta C/wali indhagudhan Ahna wasirka ganacsiga, waa wasiradii ugu horeeyey ee taga deegaanka sanaag sababna ay ugu noqoty wasiir Aamino Mohamed
Deegaandii kormeerka oo ay ka mid ahaayeen Gaalkacayo,Galdogob,Salaama, Qaw,Ceelaayo, Durduri Laasqoray ,xayliyaale,Gelwayte,, Qa Dhumay,Taleex, iyo tuulooyin kale
Sanadki 2016 kii
Gaalkacayo, Ceelbuuh, Shimbiralle,Daarasalaam ,Bacadwayn, Laasoroox,Laanmadoow, ceeldaahir ,carmoiyo deegaanooyin kale kale
U qareemidii barlamaankii 4.5 lagu duudsiyey sool iyo sanaag iyo Cayn ee xubnaha maqan ee lagu daray somaliland iyadoo ka mid ahayd wefdigii uu hogaaminayeye madaxwayne ku xigeenka Camay.
Sanadki 2017 ki
Degmada Buurtinle iyo tuulooyinka hoos taga Bacadwayn ,Catamaran, Gaalkacayo, Xerojaale ,Galdogob, Buursaalax,Salaam iyo Demada Salaxi oo xuduud la leh deegaanka ismaamulka Ethiopia , Carmale ,Qaraar, Jingada. Iyo deegaano kaleba.
Dhamaan waxay ku soo maratay degaanadan kormeer, u kuurgal xaalada dhanta ah ee caafimaad ee ka jirta deegaanadaas iyo gaadhsiin daawo,iyo agab caafimaad.
Su’aasha is waydiinta mudan ayaa waxay tahau gabdhan iyo kuwii shalay lagu xasuuqay buuraha Calmadow yaa xaquuqdooda u raadinaya? Mase kula tahay nimanka dumarka dacal haystaa in Buuraha Calmadow ay alshabaab ka xoraynayaan
Maxaa looga bedelay Wasaaradda caafimaadka?
← Gudoomiye ku xigeenkii hore ee Gobolka Bari oo Bosaaso Lagu dila 1997 iyo 2017. waa isu soo egyihiin →